Kaluumaysto shaqadoodi u joojiyeey Maraakib Jariif kawadda Xeebaha Gobalka Gardafuu (dhegayso) – Radio Daljir
Kaluumaysto shaqadoodi u joojiyeey Maraakib Jariif kawadda Xeebaha Gobalka Gardafuu (dhegayso)
Seteembar 22, 2018 1:09 g 0
Doonyo iyo Maraakiib Jariif ah oo loo malaynayo in laga leeyahay dadka Iiraan iyo Yamen ayaa si xoogan uga kaluumaysanaya xeebaha Bari ee Puntland,kuwaas oo dhibaato xoogan ku haya Kaluumaysadda Puntland.
kalumaysatada Degmadda Gumbax ee gobolka Gardafuu ayaa Daljir u sheegay in qaati ay ka taagan yihiin xiliga ay ku guda jiraan shaqo maal meedkooda Doonyo iyo Maraakiib Jariif ah oo kala tagtay qalabkii ay ku shaqaysan jireen.
Kaluumaysatada qaar ayaa shaqadoodii u joojiyay dhibaatada ay kala kulmaan Maraakiibta jariifka ah .
Guure Cali Daad oo ah Gudoomiyaha Degmada Gumbax ayaa Radio daljir siyeey waraysi dheer oo uu kaga warbixinayo dhibaatada ay geeysanayaan Maraakibta jiriifka,isago fariin u diray Madaxda Puntland.
Ururadda Bulshada Rayidka ah oo ka hadlay soo Xulista Xubnaha Cusub ee Barlamaanka (dhegayso)